यस्ता गुण भएकी महिलाका श्रीमान् संसारकै भाग्यमानी ! – live 60media
यस्ता गुण भएकी महिलाका श्रीमान् संसारकै भाग्यमानी !
श्रीमान् श्रीमती भनेको एक रथको दुई पाङ्ग्रा हुन् । एक बिना अर्काको सम्भव हुँदैन। विवाहपश्चात् जुन घरमा श्रीमतीले असल व्यवहार देखाएर कर्तव्य पुरा गर्न सक्छिन् उही संसारको असल श्रीमती एवं बुहारी ठानिन्छिन्।
जब श्रीमानको घरमा पाइला टेकिसके पश्चात् जुन घर सञ्चालन गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका श्रीमती अर्थात् महिलाको हुन्छ। यदि महिला नै गलत बाटोमा हिँड्यो भने त्यो घर परिवार स्वतः बिग्रिन्छ। जस कारण यस्ता गुण भएका श्रीमती भएमा जीवन सरल र सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।
मीठो बोली: विभिन्न अध्ययनका अनुसार महिलामा हुनुपर्ने एक महत्वपूर्ण गुण मिठो बोली हो। यदि तपाईँकी श्रीमती घरमा सबैसँग मिठो बोल्छिन् र व्यवहार गर्छिन् भने तपाईँ भाग्यामानी हुनुहुन्छ।
घर सम्हाल्न सक्ने: घरको काम जस्तैः खाना बनाउने, सरसफाई गर्ने, सजावट गर्ने, कपडा तथा भाडा सफा गर्ने, बच्चाको जिम्मेवारी निभाउने, घरमा आएका पाहुनाहरुलाई आदर, सम्मान गर्ने, कम खर्चमै घर चलाउन सक्ने गुण भएकी श्रीमती छिन् भने तपाईं आफूले आफूलाई भाग्यामानी सम्झिनुहोस्। त्यस्तै, श्रीमतीमा हुने यस्ता गुणले तपाईँको घरमा झग-डा हुँदैन।
धर्म/संस्कार-धर्म संस्कार भनेको एक अनुशासन हो। यदि तपाईँकी श्रीमती धर्म / संस्कारको पालना गर्छिन् अर्थात आस्थिक छिन् भने पनि मान्नुस् तपाईँ भाश्यमानी हुनुहुन्छ। आस्थिक श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान र परिवारको हितमा काम गर्छिन्। उनले यस्तो काम गर्दिनन् जुन कामको कारण परिवारमा कलह होस् वा कसैलाई चित्त दुखोस्।
श्रीमानसँग सल्लाह: यदि तपाईँको श्रीमतीले तपाईँको कुरा मान्छिन् र सल्लाह लिन्छिन् भने पनि तपाईँ भाग्यामानी हुनुहुन्छ। त्यस्ती श्रीमतीलाई धर्म ग्रन्थहरुमा पतिव्रता मानिन्छ। पतिव्रता पत्नी सधैँ आफ्नो श्रीमानको सेवामा लाग्छिन्।
श्रीमतीले तपाईँको चित्त दुखाउने कुरा गर्दिनन्। आफ्नो श्रीमानलाई सधैँ प्रसन्न राख्ने प्रयास गर्ने श्रीमतीलाई श्रीमानको पनि त्यस्तै ब्यवहार हुने हुँदा उनीहरुको दाम्पत्य जीवन निकै सुखदायी बन्छ।
मानिसहरुको स्वभावले एक अर्काको जीवन नर्क बनाउँछ । राम्रो स्वभाव भएका स्त्री भयो भने पतिको जिबन एकदम राम्रो हुन्छ । अनि त्यसै गरि राम्रो स्वभाव भएको पति भयो भने पनि स्त्रीको जिबन स्वोर्गीय हुन्छ । तर यी दुइ जना मध्ये एकजना नराम्रो भयो भने दुबैको जिबन नर्ग समान हुन्छ ।
हामीले महिलाहरुमा पाइने ५ नराम्रा स्वभावबारे जानकारी गराउँदैछौँ, त्येसो त पुरुषहरु चाही सबै राम्रा हुन्छन भन्ने होइनन् । पुरुषका कारण पनि सम्बन्धमा धेरै समस्या आउन सक्छन् ।
नमिठो वचन बोल्ने– वचनको वाण निकै घातक हुने गर्दछ । चर्को र कर्कस स्वरले सम्बन्धमा दरार पैदा गर्न भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । जीवनका हरेक पलहरु निकै आघातपूर्ण हुने गर्दछन् । तर यसको ठीक विपरित, मीठो र भद्र वचन बोल्ने महिला जीवनसाथी बनेमा एउटा पुरुषको जीवन अमृतमय बन्छ ।
कचकचे र रुञ्चे– सामान्य कुरामा पनि किचकिच गर्ने र रुञ्चे स्वभावका महिलाले पनि पुरुषको जीवनलाई नराम्रो असर पारिरहेका हुन्छन् । दिनहुँको गनगन कचकच र गुनासोले पुरुषको मनोबल गिर्दै जान्छ । यस प्रकारको स्वभाव भएका महिलाले पुरुषलाई हौसला दिनुको साटो उसको जीवनलाई निराश र कुण्ठाग्रस्त बनाउँछन् ।
हस्तक्षेपकारी स्वभाव– कुनै-कुनै महिलाले पुरुषले गरेका हरेक काममा हस्तक्षेप गर्न मन पराउँछन् । यसरी हस्तक्षेप गर्दा आफूले जितेको महसुस गर्दछन् । तर यस्तो कार्यले पुरुषको जीवनको स्वतन्त्रता तथा निजत्व समाप्त हुन्छ भन्ने उनीहरुलाई अलिकति पनि ख्याल हुदैन । अनि स्वतन्त्रताविनाको जीवन निरस हुने नै भयो ।
पतिलाई आफ्नो मात्रै ठान्ने– पति आफ्नो मात्रै हो वा उसको अरुसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने महिलाले हरेक पुरुषको जीवनलाई संकटमा पारिरहेका हुन्छन् । यस प्रकारको स्वार्थी सोंच राख्ने महिलाले पुरुषको सार्वजनिक जीवन ध्वस्त पारिदिन्छन् । फलस्वरुपः हरेक पुरुष आफ्ना बाबु आमा, इष्टमित्र, साथीभाई तथा सहकर्मीबाट टाढा हुन बाध्य हुन्छन‍् ।
मनि माइन्डेड अर्थात पैसालाई मात्र महत्व दिने– आफ्नो श्रीमानले सधैं पैसा मात्रै कमाओस् भन्ने सोंच भएका महिलाहरुले हरेक पुरुषलाई पैसा कमाउने मेशिनबाहेक अरु केही ठान्दैनन् । दाम्पत्य जीवनमा पैसाले प्रेम, समर्पण र बफादारिताको ठाँउ लिएपछि आत्मीयता भन्ने कुरा हराउछ। पैसाप्रति मात्रै आशक्ति राख्ने आफ्नो पतिको मात्रै होइन आफ्नै जीवन पनि निकै निरस बनाउँछन् ।
← अनिताको सबैभन्दा जो’खिम अ’प्रे’शन हुदै, यदि अ’प्रे’सन सफल नभए पाएप बाटै जीवनभर सास फेर्नु पर्ने (भिडियो सहित)
कोरोनाविरुद्ध खोपको नमुना लिएर रुसी टोली नेपाल आउँदै →
विप्लव सँगै हामी पनि आज बाट कार्यक्रमको रिपोर्टिङका लागि सार्वजनिक हुने भएका छौँ भन्दै आए रवि लामिछाने
१२ बजे राति श्रीमानलाई अर्कैसग रंगेहात भेटेपछि ,न्याय माग्दै रु’दै सन्तोष देउजासंग… (हेर्नुस् भिडियो)